TikTok makaa caawin karaa inaad ka badbaado afduub? | Radio Himilo
Home / Arrimaha Bulshada / TikTok makaa caawin karaa inaad ka badbaado afduub?
TikTok makaa caawin karaa inaad ka badbaado afduub?
Himilo – 61-jir boliiska ay magaciisa ku sheegeen James Herbert Brick ayaa laga qabtay mid ka mid ah jidadka gobolka North Carolina ee koofur-bari Mareykanka, isaga oo la baxsanaya gabar u afduubneed.
Tan iyo 2-dii November, ayaa la raadinayay gabadhan oo 16 jir ah, markaasi oo la baahiyay warka sheegaya in la la’yahay.
Iyada oo ku jirtay gaariga afduubaha xilli ay soconayeen wado marta degaanka Laurel, ayey inta suulka laabtay faraha fidisay kor u taagtay gacanta, taasi oo ka mid ah callaamadaha ku jira aaladda Tik Tok ee loo adeegsado halisaha, sida afduubka amaba jir dilka.
Nin u dhashay Kanada oo socoto ahaa, ayaa arkay gabadha yar, gartay inay khatar ku jirto markiibana waxa uu wacay lambarka boliiska waxa uuna u tilmaamay nooca gaariga ay ku afduuban tahay.
Waxaa lagu qabtay bar koontarool oo ay boliisku leeyihiin, kaddib baaris lagu sameeyay, waxay boliisku sheegeen in ninkaasi 61-jirka ah uu qorsheynayay inuu gabadha yar kufsado, waxaana markiiba la dhigay xabsiga.
Gabadha yar ayaa sheegtay inay ku jirtay socdaalka ku wajahnaa gobolka Ohio, halkaasi oo ay ku nool yihiin xubno ka mida ehelkeeda markii ay ku dhaceysay gacanta afduubaha.
Faah faahin intaasi dhaafsiisan lagama bixin siduu u dhacay afduubkeeda, waxaase boliisku dib ula mideeyeen reerkeeda.
Previous: Raheem Sterling oo doonaya inuu ka tago Manchester City
Next: Nin 49 xabbo oo tufaax ah oo lagu soo tuuray ku qabtay afkiisa